भोली माघ १२ गते आइतबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस - Rapti Khabar
मुख्य पृष्ठ /मुख्य समाचार/भोली माघ १२ गते आइतबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस
बिक्रम सम्बत २०७६ साल माघ १२ गते नेपाल सम्बत ११४० आइतबार रहेको छ । अंग्रेजी पात्रोअनुसार २०२० जनवरी २६ तारिख ।
मेष-कठिनाइ बुन्ने र तिनीहरूलाई बढाउने तपाईंको बानीले तपाईंको नैतिक फाइबर कमजोर हुन सक्छ। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। आज उपस्थित भएको सामाजिक भेलामा तपाईं विशेष व्यक्ति हुनुहुनेछ। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! आज तपाईंले गुलाब झन रातो र नील लोहित झन नीलो देख्नुहुनेछ किनकि प्रेमको नशाले तपाईंलाई माथि पुर्याएको छ।
वृष-धेरै स्रोतबाट मौद्रिक लाभ हुनेछ। साथीहरू, व्यापार सहयोगिहरु र आफन्तहरूसँग आफ्नो चासोको रक्षा गर्नुहोस – किनकि तिनीहरू तपाईंको आवश्यकता अनुसारको नहुन सक्छन्। तपाईंका आँखा आफ्नो प्रेमीको अँध्यारो रातलाई प्रकाश गर्न सक्ने उज्ज्वल छन्। आज आफ्नो जोडीसँग तपाईंको यो जीवनको सबैभन्दा राम्रो पूर्वसन्ध्या हुन सक्छ। बृष राशिभएकाहरुको लागि भोली आइतबारका दिन तपाईंमा असीम ऊर्जा र उत्साह आउनेछ र तपाईंले आफ्नो फाइदाको लागि कुनै पनि मौका प्रयोग गर्नु हुनेछ।
मिथुन – यो दिन तपाईंको प्रेम जीवनको मामलामा शानदार छ। प्रेम गरि राख्नुहोस्। तपाईंमध्ये कसैले टाढाको यात्रा गर्नुहुनेछ – यो धेरै व्यस्त हुनेछ – तर अत्यधिक फलदायी पनि हुनेछ। आज बिहान तपाईंलाई केही प्राप्त हुन सक्छ जसले गर्दा तपाईंको आफ्नो सम्पूर्ण दिन रमाइलो हुनेछ। मिथुनको लागि भोली सांझ चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र सुन्दर मुडमा राख्नेछ। तपाईंलाई आनन्दित महसुस गर्ने काम गर्नुहोस्, तर अन्य मानिसहरूका मामिला अलग्गै बस्ने प्रयास गर्नुहोस्।
कर्कट-तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। पोस्टद्वारा आएको पत्रले सम्पूर्ण परिवारमा खुसीको समाचार ल्याउँछ। नयाँ प्रेम जडान गठन गर्ने सम्भावना बलियो हुनेछ तर व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज प्रेम गर्न पर्याप्त समय प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ।
शिंह -आफ्ना साथीहरूसँग केही समय बाँट्नुहोस् – यसले तपाईंलाई धेरै राम्रो गर्नेछ। तपाईंले आफ्नो उत्तम व्यवहारमा हुन आवश्यक छ – किनभने आज आफ्नो प्रेमीलाई नराम्रो लाग्न धेरै केही हुनु पर्दैन। तपाईंको जोडी आज आफ्ना मित्रहरूसँग व्यस्त रहन सक्छन् जसले तपाईंलाई उदास बनाउन सक्छ।”आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ।” कल्पनामा पछि नपर्नुहोस् र धेरै व्यावहारिक हुने प्रयास गर्नुहोस् ।
कन्या-व्यक्तिगत मामिलाको समाधान गर्न आफ्नो दृष्टिकोणमा उदार हुनुहोस्, तर आफुलाई प्रेम र हेरचाह गर्नेहरूलाई चोट नलाग्ने गिर बोल्नुहोस्। कसैको हस्तक्षेपले तपाईंको प्रियतमासँगको सम्बन्ध तनाउपूर्ण हुन। केही मनोरञ्जनका लागि राम्रो दिन। तपाईंले आज आफ्नो वैवाहिक जीवनका एउटा कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। स्वयं चिकित्सा गर्नाले दबाइको निर्भरता हुन सक्छ। कुनै पनि दबाइ लिनु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् – अन्यथा दबाइका निर्भरताको सम्भावना उँचो छ।
तुला-भोलि कार्डमा रोमान्टिक प्रभाव बलिया छन्। अरूलाई मद्दत गर्न आफ्नो समय र ऊर्जा समर्पण गर्नुहोस् – तर तपाईंको चासो नहुने विषयहरूमा संलग्न नहुनुहोस्। आज, तपाईं र तपाईंको जोडीले साँच्चै गहिरो आत्मीय प्रेमालाप गर्नु हुनेछ। हृदयरोगीहरूलाई कफी छोड्ने सही समय हो। कुनै पनि बढी प्रयोगले तपाईँको हृदयमा अनावश्यक दबाब पार्नेछ। आफन्तहरू तपाईंलाई सहयोग दिन तयार हुनेछन्।
वृश्चिक-स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर आज तपाईंले चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन। तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूले तपाईंको नैतिकता र जाँगरलाई उँचो उठाउँनेछन्। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। बच्चाहरुले अझ बढी हेरविचारको माग गर्नेछन् – तर तिनीहरूले सहयोगी र मायालु व्यवहार गर्नेछन्। तपाईँले कति सुन्दर काम गर्नुभएको छ भन्ने देखाउन आज तपाईंको प्रेम फूल्नेछ। तपाईंको सञ्चार प्रविधी र काम कौशल प्रभावशाली हुनेछ। आज तपाईंले र तपाईंको जोडीले आफ्नो वैवाहिक जीवनको उत्तम स्मृति सिर्जना गर्नु हुनेछ।
धनु-तपाईंको हडबडे व्यवहारले एउटा मित्रलाई केही समस्या पैदा गर्न सक्छ। आफ्नो क्यारियरको योजनामा भन्दा बाहिरी गतिविधिहरुमा धेरै समय नष्ट गरेर बच्चाहरुले केही निराश बनाउँछन्। रोमान्टिक मुडमा अचानक परिवर्तन हुनाले तपाईंलाई धेरै नराम्रो लाग्न सक्छ। कुनै आफन्त, मित्र वा छिमेकीले आज तपाईंको वैवाहिक जीवनमा खिचलो ल्याउन सक्छ।
मकर-तपाईंको दिने मनोवृत्तिको फल प्राप्त हुनेछ किनकि तपाईं शंका, निराशा, विश्वासको कमी, लोभ, आसक्ति, घमण्ड र डाह जस्ता धेरै दोषबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। ढिलो भएका भुक्तानी प्राप्त भएकोले पैसाको समस्यामा सुधार भएको छ। पुराना आफन्तहरूले अव्यावहारिक मागहरू गर्ने सम्भावना छ। तपाईंले आफ्नो जीवन भन्दा बढी तपाईंलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो वैवाहिक आनन्दको लागि एउटा अचम्मको आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
कुंभ-व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ। समस्या घर अगाडि नै बढ्दैछ, यसैले तपाईंले ध्यान दिएर बोल्नु पर्नेछ। आज, तपाईं र तपाईंको जोडी बीचको झगडामा कुनै सुन्दर स्मृतिको कारण विराम आउन सक्छ। त्यसैले, गरम तर्कको समयमा पुरानो सुन्दर दिनको सम्झना गर्न नबिर्सिनुहोस्।
मीन-पुरानो मित्रसँग पुनर्मिलन भएकोले तपाईंको आत्मालाई उज्यालो पार्नेछ। आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। तपाईंले राम्ररी विकास गरेकोले प्रेम जीवनले पनि एउटा मोड लिनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
ओली र दाहालबीच कार्यविभाजनको सवाल: हटाइने मन्त्रीहरूबारे लगभग टुंगो लाग्यो
काठमाडौंमा घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ ? यी हुन् सस्तोमा जग्गा पाइने ५ ठाउँ
पोखरा पुगेर एमसीसीबारे प्रचण्डले दिए यस्तो प्रतिक्रिया, अब के हुन्छ ?